PA6 filament Factory - Shiinaha PA6 filament-saareyaasha, shirkado cusub
Sahayda sahayda PA6 fiilada burushka
Magaca kiimikada ee PA6 filament waa polycaprolactam monofilament, oo ka kooban polycaprolactam. Waa wax soo saar dhaqaale marka loo eego taxanaha nylon. Baaxad ahaan dalabkeeda: burushka baaquli, burushka dheriga, burushka dhalada, burushka wajiga, burushka qaawan, burushka qubeyska, burushka warshadaha, iwm.
pa 6 fiilo birta ah
PA6 filament waa nooca ugu badan ee dhogorta nylon adag ee warshadaha burushka. Qiimaha fiilada burushka PA6 waa mid jaban, waxayna leedahay taabasho jilicsan. Waa shey sifiican loo isticmaalo burushka ilkaha. Baaxadda dalabka: burushka baaquli, burushka dheriga, Burushka dhalada, burushyada wejiga lagu dhaqo, iwm
0,5mm PA6 hufan ayaa xarigga ka duubay birta siligga ah
Xadhigga PA6 burushku wuxuu leeyahay sifooyin farsamo oo aad u fiican iyo caabbinta saamaynta, iska caabinta abrasionka, waxqabadka heerkulka hooseeya ee wanaagsan, xasilloonida kiimikada wanaagsan, iska caabinta alkali, ee si fudud ugu milmi kara fenol, toluene, iwm, waa badeecad dhaqaale ahaan aad ugu yar taxanaha naylonka